Isevisi Futhi Download
Umshini we-mask flat
Umshini wokwenza imaski we-N95
Umshini wokushisela i-Earband
Umshini wokusika imaski
Umshini wokuhlanganisa imaski onqenqemeni
Umshini wemaski we-KF94
Umshini wokufihla indebe
Khuluma no-HaoJing+86 18652005139
Ulwazi olujwayelekile lomshini wemaski ozenzakalelayo
Umshini wokufihla imaski, njengoba negama lisho, umshini wokukhiqiza imaski. Manje sekunemishini yemaski emakethe: umshini we-mask oyisicaba, umshini we-mask wenkomishi, umshini we-mask womlomo wedada, umshini wokugoqa imaski, umshini we-mask othomathikhi njalonjalo. Labo abathenge i-automatic flat m...
Isingeniso sokuhlukaniswa okulula komshini wemaski othomathikhi
Kunezinhlobo eziningi zemishini yemaski othomathikhi, ngokusho kokukhiqizwa komamaski abahlukene, ikakhulukazi ihlukaniswe yaba umshini we-mask othomathikhi, indlebe yangaphakathi ezenzakalelayo enomshini we-mask, umshini we-mask othomathikhi wenkomishi, umshini we-automatic duckbill mask, imaski egoqayo...
Ungawulungisa kanjani iphutha lomshini we-fish mask othomathikhi?
Ungawulungisa kanjani iphutha lomshini we-fish mask othomathikhi? Lokhu kuyinkinga ehlangatshezwana nabakhiqizi abaningi bemaski abathenge umshini ozenzakalelayo we-fish mask, abasebenzi abaningi abasebenzisa umshini abazi ubuchwepheshe futhi abazi ukuthi bangayilungisa kanjani imishini. Ngakho-ke, kanjani ...
Ukukhishwa okujwayelekile komshini wokuhlanganisa indlebe yemaski alahlwayo
Umshini wokushisela imaski wendlebe wangaphakathi othomathikhi we-inner ear flat uhlanganisa umshini wokushisela webhande lendlebe elingaphakathi kanye nesidlulisi, esinomsebenzi wokushisela ibhande lendlebe yangaphakathi, i-hem welding, i-hem cutting kanye nokuphuma kwemaski kwemaski, ukubona ukukhiqizwa okuzenzakalelayo kwebhande lendlebe yangaphakathi. ...
Umshini wemaski we-N95 ukwehluleka okujwayelekile kanye nezixazululo
Umshini wemaski we-N95 ozenzakalelayo uwulayini wokukhiqiza imaskhi omusha futhi oyinkimbinkimbi, sivame ukuhlangana nezinkinga ohlelweni lokuwusebenzisa, okokuqala, sidinga ukuqonda ngokucacile ukuthi yimaphi amaphutha azokwenzeka emshinini wemaski we-N95, lawa maphutha angaxazululwa ngokushesha. a...
Kungani umshini we-mask oyisicaba uyimodeli ethengiswayo eshisayo kumishini yemaski?
Kusobala kubakhiqizi bemaski nabacubungulayo ukuthi umshini we-mask oyisicaba uwumshini ozenzakalelayo ngokuphelele wokukhiqiza imaski eyisicaba. Kungaba ngokuzenzakalela ngokugcwele kusukela ekukhiqizweni komzimba oyinhloko we-mask kuya ekushiselweni kwebhande lendlebe, intambo yekhala kanye ...
Inqubo yokukhiqiza imaski alahlwayo ngabakhiqizi bemishini ye-Flat mask
Kusukela ubhubhane lwe-coronavirus, kube nokushoda kwezinsiza zamaski ezweni lonke nasemhlabeni. Ukungakwazi ukuthenga imaski kwaba yindaba eshisayo ngaleso sikhathi. Phambilini, imaski ibingesona isidingo empilweni yansuku zonke yawo wonke umuntu, kepha manje imaski isiyimpahla...
Ugcinwa kanjani wonke umshini wemaski oyisicaba?
Ukugcinwa kwansuku zonke nokugcinwa komshini we-mask oyisicaba kubaluleke kakhulu. Ngokuvamile, udinga ukulungisa okwengeziwe emshinini we-mask ngezikhathi ezithile ukuze wenze umshini we-mask usebenze ngokuphumelelayo, okubuye kuthuthukise kakhulu ukuphepha kwabasebenzi emsebenzini....
Ingabe kuthembekile ngempela ukuthenga umshini womlomo osetshenzisiwe?
Lolo bhubhane ekuqaleni kuka-2020 lwaqala ukugijimela igolide embonini yemishini yemaski neyomlomo! Sayenziwe ihaba kangakanani isivinini sokwenza imali embonini yomshini wokufihla imaski ngaleso sikhathi? U-Shenzhen ugwayi wokuqala we-electronic u-Chen wazitshela ukuthi, "uyahlanya kakhulu, fr...
Ikusasa labakhiqizi bemishini yemaski
Ekuqaleni kuka-2020, ubhubhane olusha lwe-coronary heart disease lwenza imaski yashoda futhi yacindezela umshini wemaski phezulu emakethe ngophawu olufanayo. Akunakuphikwa ukuthi isidingo semishini yemaski sikhona, kepha ngenqubo yobhubhane olusha kancane kancane lunqanda ...
abakhiqizi bemishini yemaski yobuso bendlebe indlebe ejikelezayo i-Rotary manual ear band welding umshini wokwenza imaski
Uma kuqhathaniswa nomunye umshini wokushisela we-earband we-manual, lo mshini wokushisela i-earband ufakwe idivayisi ejikelezayo. Udinga kuphela ukufaka imaski kudivayisi bese ucindezela inkinobho ukwenza ukushisela. Asikho isidingo sokuphendula imaski mathupha. Uma ufuna ukushisela ezinye izinhlobo zamamaski, y...
Umshini wokushisela we-ear band welding ezenzakalelayo umphakeli womshini wemaski we-earloop
Lo mshini wokushisela we-earband ozenzakalelayo usetshenziselwa ikakhulukazi ukushisela imaski engu-N95, futhi udinga umuntu oyedwa kuphela ukuwusebenzisa. Ngomshini wokusika kanye nomshini wokubopha onqenqemeni, imaski ephelele ingakhiqizwa. Ingakhiqiza imaski engama-20 ngomzuzu. Idivayisi isebenzisa isikrini sokuthinta ukuze sisebenze, esivumelana...
Ikheli: 99 Shangyu Road, Xinbang Town, Songjiang District, Shanghai
Ucingo: +86 18652005139
BHALISA FUTHI UTHOLA IZINDABA ZAkamuva NOKUNIKEZWA